Alcatel onetouch inotyisa xl ine windows 10 maoko-on
Kuru Nhau & Ongororo Alcatel OneTouch Inotyisa XL ine Windows 10 maoko-on
Chimwe chezviziviso zvinonakidza zvakaitwa pamberi peCES 2016 chaive Alcatel & rsquo; s kutanga kwe ONETOUCH Fierce XL ine Windows 10. Ichi chishandiso chakakosha munzira dzinoverengeka. Kutanga, ikambani & rsquo; s yekutanga Windows chishandiso chinoshandisa iyo itsva Windows 10 inoshanda sisitimu. Chechipiri, ndeye yakasarudzika neT-Mobile. Chekupedzisira, zvinoitika kuve yekutanga Windows chishandiso chinopihwa neTimu Magenta munguva yakati rebei.
Ichokwadi kune fomu yemidziyo yeWindows, iyo pepa pepa haidi kuverenga neepamusoro-pasherufu zvinhu zvinoita kuti ishande mushe uye yakarongedzwa ficha yakatarwa. Iyo ONETOUCH Inotyisa XL ine Windows 10 ichabatanidza iyo Hardware kune izvo zvinotarisirwa kuve mutengo unodhura unova iwo musimboti wekusunda neAlcatel & rsquo; s zviziviso gore rino kuCES.
Kubva payakatangisa mushandirapamwe wayo wekutengesa gore rapfuura, kambani yakawedzera zvakanyanya kutsigira kwevatengi uye yanga ichitora mhinduro yakagamuchirwa kubva kune vatengi kuenda pamoyo painoburitsa mhando nyowani yemidziyo inozoshandira misika iri kusimukira uye yakavandudzwa zvakafanana.
Iyo Inotyisa XL ine Windows 10 ndeyekushamisira, asi yakachena dhizaini. Izvo hazvibve kune unochengetedza mutauro dhizaini yemamwe ma Nokia nhare. Ukuru hwayo hausi kunze kwenzvimbo yemamwe madhijitari ane ekuratidzira ayo anotarisa rakakura divi rezvazvino mazuva ano.
Ichi chishandiso chine mabhatani akakwenenzverwa ekushambadzira kwete pane e-screen mabhatani ayo anogona kuwanikwa pane mamwe mabhajeti anoshamwaridzika michina.
Iyo 5.5 IPS inoratidzira ine resolution ye720 x 1280 pixels haisi kumhanya kuti ive munzvimbo yekutanga pane iyo spec-sheet, asi kupihwa ichi chishandiso chichatengeswa kune yakanyanya bhajeti yemutengo poindi, zvinonetsa kunyunyuta pamusoro pazvo. Chiratidziro chakataridzika chakadzama zvakakwana kuti unzwisise zvakakwana mukati mechidzitiro.
Processor uye ndangariro
Kumhanyisa kuratidzwa kweOONETOUCH Fierce XL ine Windows 10 iri quad-core Qualcomm Snapdragon 210 CPU yakanangidzirwa ku1.1GHz, simba rakawanda rekubata zvese zvakakosha mabasa uye kugonesa kuyerera kwakatsiga kwagara kuri chiratidzo chenguva yazvino Windows nharembozha. Iko kune 2GB ye RAM, pamwe ne16GB yekuwedzeredzwa yekuchengetedza.
Mukukosha kwakakosha kuna Alcatel, kambani inopawo inofungidzirwa & ldquo; mushandisi anowanikwa & rdquo; nhamba yekuchengetedza, iyo inofungidzirwa kuve ingangoita 11GB. Uyu ndiwo muenzaniso watingade kuona vamwe vagadziri vachitevera.
Interface uye mashandiro
Iyo Windows 10 interface inonyanya kufanana nezvayakave kwemakore mazhinji. Iyo mataira inopa inesimba ziviso uye inogona kuve yakagadzirirwa mune akasiyana saizi mukati meyese skrini. Imwe nzvimbo maWindows mafoni agara akaremekedza iri mukusagadzikana zvakanyanya, maficha akaiswa ekupinda nharembozha aive akafanana neapo emidziyo yepamusoro, neshanduko dzakaitwa parutivi rwehardware.
Iyo huru kamera pane iyo inotyisa XL ine Windows 10 ndeye 8-megapixel sensor iyo inogona kutora 720p vhidhiyo pamakumi matatu mafuremu-pasekondi. Pamberi, 2-megapixel kamera.
Mitengo, zuva rekuburitsa, uye zvinotarisirwa
Kana mutengo weOONETOUCH Anotyisa XL ane Windows 10 & rsquo; s Android-powered sibling, iyo ONETOUCH Fierce XL, iri chero gwara, iyo Windows powered handset ingangowanikwa pasi pe $ 150 pakutengesa kuzere. Alcatel haina kupa zuva rekuburitsa zviri pamutemo, kungotiudza, & ldquo; munguva pfupi. & Rdquo; Nekudaro, taura wakakomberedza moto wemusasa unoita kunge unofunga kuti T-Mobile ichave new Windows 10 chishandiso chiri kutengeswa mukati memavhiki anotevera.
Iko chinovheneka ichi chishandiso inyaya yekuti yekupinda nhanho mamiriro anokwanisa Windows 10 zvakanaka. Zvidzoreso zvinopihwa neMicrosoft zvakanangana, uye kana iko kukosha kwesarudzo kwaitwa neicho chokwadi kuva bhajeti-inoshamisira mutengo weti, iyo ONETOUCH Inotyisa XL ine Windows 10 inoratidza kuti ine zvakawanda zvekupa.
Alcatel OneTouch Inotyisa XL ine Windows 10
Iwo akanakisa matete uye akareruka iPhone X makesi uye anovhara
Samsung Galaxy S6 chigunwe chekutemera vs Apple iPhone 6 TouchID
Maitiro ekukurumidza kudzima kumeso ID uye kumanikidza iPhone kutora pasipoti
Microsoft & apos; s Dema Chishanu madhiri anosanganisira ane hunhu Surface Pro 6 uye Surface Go kuchengetedza
Samsung Galaxy Note5 vs Samsung Galaxy S6 kumucheto +
iPhone 12 Pro Max vs iPhone 12 / Pro / Mini: kamera kufananidza